Yintoni i-MDF emele kwiSigaba seGalofu?
Ngezinye izihlandlo ibonakaliso ibonakala ngasezantsi kweluhlu lwamanqaku
"I-MDF" isicaciso esivakalayo ngegama elibhekiselele kwigama le-golfer kwiibhodi zokuphambili ze- PGA ezibonwa kukuprinta okanye kwi-intanethi. Nantsi oku kuthetha ntoni:
Impendulo emfutshane: "I-MDF" imele "yenziwe isinqununu / ayizange igqibe."
Inkcazelo ebanzi: Wonke umntu uyazi ukuba yiyiphi "MC" ithetha xa ibonakala ngasemva kwigama le-golfer kwiimpawu zentambo; "UMC" uthetha " ukusikwa ." Kodwa igama elithi "MC" liye lajikeleza ixesha elide. Ukususela ngo-2008, isiqalo esitsha saqala ukubonisa kwii-golf izikolo: MDF. Kwaye imele ntoni "i-MDF"? MDF, xa ibonakala kwiigalofu zegalufu, ithetha "yenza isinqununu kodwa ayizange iqedele umdlalo." Le golfer yenza i-36-hole cut-hole, kodwa yalahleka i-54-hole cut.
Masihambe ngokujulile, kubandakanya ukuchaza ukuba nini kwaye kutheni isizathu sesibini, isiqendu esingama-54 saqala ukubonisa kwi-PGA Tour.
Kutheni i-Golfer i-Golfer ingagqiba ukuTyekisa Ukuba Yenza iCandelo?
Namhlanje, ngeendlela ezimbalwa ze-Tournaments kwi-PGA Tour ngamnye ngonyaka, kukho ngokwenene ukucutshulwa kwembini : kukho umgca wemveli emva kweemingxuma ezingama-36 (abo ba golisa baya ekhaya emva kokujikeleza kwesibili); kwaye kukho ukusikwa kwesibini emva kweemingxuma ezingama-54. Oku kubizwa ngokuthi ukusikwa kwinqanaba, kunye nabagadi begalufu abangaphuthelwa ukusikwa kwesibini abayidlali lekota yesine.
Isizathu sokunqunyulwa kwesibini kubandakanya ukugcina iinkalo zemiqhudelwano ezincinci kwaye zilawulwe ngokugqithiseleyo ngeveki zeeveki. Kwiinkqubo ezininzi zokutyekwa okwesibini akudingeki, ngenxa yokunqunyulwa kwe-36-hole kuyo umsebenzi wokunciphisa intsimi kwisayizi efunwayo. Kodwa ngezinye iindwendwe ze-PGA Tour, isinqununu sokuqala sishiya ngaphezulu kwegalufa ngaphezu kokuba uhambo lufuna ukudlala ngeveki ngeenxa zonke. Yilapho iinqununu ezingama-54 zikhutshwa.
Ukuqokwa kwe "MDF" kwaqalwa ukwahlula abagadi begolfu ababenqumle umhlathi ongama-36 kodwa ingekho imvula engama-54 kubo abagadi begalufu abalahlekelwa ukusika okungama-36.
I-Cut Rule Change kunye ne-Origins ye-MDF
Ukusetyenziswa kweemviwo ze "MDF" ngo-2008 kwi-PGA Tour. Ukungena kuloo nyaka, iPGA Tour yatshintsha umgaqo wayo wokusika . Utshintsho lukhokelela kwimiphumo engavumelekanga: Kwezinye iindwendwe, inani elincinci labadlali begalufu bebhenwe ngokwenza isiqingatha esingama-36, kodwa abazange bavunyelwe ukuba badlale ujikelezo lwesithathu nolwesine.
Abo bahamba ngegolfu bafumana iingongoma ze- FedEx Cup kwaye bahlawulwa ngokungathi baqedile imingxuma engama-72, kodwa - njengabagadi begalufu abaye baphoswa ukusika-baya ekhaya emva kweemingxuma ezingama-36.
Ukusebenzisa i- "MC" kwimigangatho yegalufu ukubhekisela kule golferen ayifanelekanga, kuba, ngokwenene, bayinqumle . Ngako oko "i-MDF" yenziwe yenziwe i-cut cut, ayizange igqibe.
Njengoko kuvela, umgaqo odale le miphumo engavumelekanga-eyaziwa ngokuba yiRule 78 - ikhutshwe ngokukhawuleza. I-PGA Tour ithathe indawo yalo ngomgaqo osikiweyo owusetyenzisiweyo ngoku: Ukuba abangaphezu kwe-78 abagadi begolfu benza ukusika kwemida engama-36, ukusikwa kwesibini, emva kwezimbobo ezingama-54, kwenzeka.
Kwaye "i-MDF" iyaphila njengendlela yokubhekisela kwigolferensi ephosakeleyo loo mihlathi engama-54. Ukuba ubona "uMdlali X 71-70-77-MDF" kwiinqwelo zegalufu, uyazi ukuba i-golfer yenza umhlathi we-36 kodwa wawubhubha umxhaka we-54.
Xa kunezigidi ezingama-78 zeGolfers zenza iCandelo, 'MDF' ibonisa
Izinto ezimbini zokugcina engqondweni: Ngoku, "i-MDF" ibonakala kuphela kwii-PGA Tour scores;
kwaye kubonakala kuphela ukuba i-cut first after 36 holes results in over 78 golfers playing round round.
I-PGA Tour ifuna inani labagadi begalufu eliya phambili kwiveki ukuba libe malunga no-70; Leyo inombolo efanelekileyo yegolfu eyenza ukusikwa, kwindlela yokujonga. Ngoba? Ukuhamba kuphezulu kakhulu ngeveki, kwaye kunjalo ngababukeli bokubukela iTV.
Abagadi beegalufu abangama-70 kwikhosi balula kakhulu ukulawula, bobabini ngokubhekiselele ekulawuleni izihlwele kunye nangokwezinga lokudlala kunye nezinye izinto ezenza ukuba i-TV ijongane ngcono.
Yoi yume o - Iimpawu ezilula zaseJapane
Yazi uKaren Wolff
Izibonakaliso zeengxaki ezinokwenzeka ekhaya
Iinqununu zeNkululeko yokuZimela kweeNguquko kwiTable-Way Table